News - Shandong Limeng mere ememme maka alaka ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ
Shandong Limeng ẹkenịmde ke ememe maka ọhụrụ alaka ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Na Machị 6, 2019, Shandong Limeng mere emume maka ngalaba ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ. Ndị mmekọ Limeng sonyere na mmemme ahụ.
Iji gbasaa nrụpụta ọrụ ụlọ ọrụ ma baa ọgaranya karịa ọrụ, Limeng Pharm na-etinye nde pam 1.2 ka ọ zụta ala 10. A ga-arụ ụlọ ọrụ ọhụụ maka ụlọ ọrụ ọhụụ maka mita 4000. Ọ ga-agwụ na ọnwa iri.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ Limeng nwere ọgwụ ọdịnala ọdịnala ndị China, ihe oriri, ụlọ ọrụ mmebe ahụ, ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ mmiri ara ehi na ebe a na-ewepụta ọgwụ ọgwụ ọdịnala ndị China, ha niile agafeela akwụkwọ ogbako narị puku. Anyị ngwaahịa e exported na Australia, USA, Puerto Rico na mba ndị ọzọ na mpaghara. Ọ gunyere mkpụrụ osisi, swiiti gummy, nkpuchi ihu na ọgwụ na-enweghị aka na ihe ndị ọzọ.
Mgbe emepere ngalaba ulo oru ohuru ohuru, a ga-agbasa oru swiiti a na-eme gummy na usoro mmeputa uzo anọ na ulo akwukwo. N'ime ogbako ogwu ogwu, a ga-agbasa ebe ndi a na 5000 square mita ma gbasaa na uzo mmeputa nke 10 maka imeputa ihe nkpuchi ihu na aru. Kwa ụbọchị, nrụpụta ọrụ a ga-adị nde abụọ. A na-emepụtakwa tube tube a na-ewepu nje anyị n'ọmụmụ ihe anyị.
Limeng Pharm's na-eso SGS, Bsi Uk na mba ndị ọzọ ama ama nke atọ na-anwale ụlọ ọrụ iji gosipụta usoro njikwa qulity, asambodo CE na iji hụ na ngwaahịa dị na mba ofesi.
The ụlọ ọrụ na-akwado ndị enterprise management echiche "na-adị ndụ na Ogo, Zụlite na Ebe E Si Nweta, gbakwasara na Technology, Uru na Management". Ọ na-agbaso iwu na iwu dị mkpa iji mepụta mmepụta na njikwa, na-ewebata usoro njikwa dị elu nke ijikọ teknụzụ, mmepụta, ahịa n'ime ụlọ ọrụ ahụ, wee rụpụta nsonaazụ dị mkpa, nke na-etinye ntọala siri ike maka ụlọ ọrụ ahụ ịzụlite. n'ọkwa ọhụrụ ọhụrụ ma mepụta narị afọ na-egbuke egbuke.
Post oge: Ọkt-10-2020